एक महिलाको कारुणिक बेदना ! १२ बर्षकै उमेर देखि बलत्कृत भएकी नारी कोठीमा यसरी चिच्याउदै बस्छिन ... - Sudur Khabar
एक महिलाको कारुणिक बेदना ! १२ बर्षकै उमेर देखि बलत्कृत भएकी नारी कोठीमा यसरी चिच्याउदै बस्छिन …
admin February 3, 2018 प्रवास 0
Total Reader : 26
एजेन्सी । २०१५ मा मानव तस्करहरुसँग फसेकी यी २४ बर्षीय युवतीले संसारलाई नै अचम्मित बनाउने घटनाको खुलाशा गरेकी थिइन् । मेक्सिकोकी कार्ला जैसिन्टोको अनुसार, उनलाई ४ बर्षमा ४३ हजार पटक बलात्कार भएको थियो । उनले ४ बर्षसम्म हरेक दिन ३० जना पुरुषबाट बलात्कृत हुनुपरेको थियो । जुन खबर विश्वभरीका मिडियाहरुले सार्वजनिक गरेका थिए ।
कार्लाको अनुसार १२ वर्षमै उनि आफ्नो परिवारकै कारण पहिलो पटक बलात्कारको सिकार बनिन्, त्यसपछी उनको जिन्दगि नर्कमा धकेलियो । कार्लाको अनुसार मेक्सिकोमा हरेक बर्ष २० हजार महिला मानव तस्करको फन्दामा पर्ने गर्छन ।
बैदेशिक रोजगारीको लागि युएई तिर जादा यस्ता औषधी लादै हो भने जेल समेत पठाउलान ! आफ्नो ख्याल आफै गर्नुहोस ! सबैको जानकारीको लागि सेयर गरौ …
मलेसियामा १ जनवरी २०१८ देखि कामदारले लेबी तिर्न नपर्ने
फिलिपिन्समा नेपाली चित्रकला प्रदर्शनी